Soonku wuxuu ka hortag u yahay cadaadiska-dhiigga,kansarka iyo sokorta ! - Awdinle Online
Soonku wuxuu ka hortag u yahay cadaadiska-dhiigga,kansarka iyo sokorta !
Cilmibaaris sanado qaadatay oo uu sagaashameeyadii sameeyay Dr. Yoshinori Ohsumi oo ah dhaqtar u dhashay dalka Japan oo ku takhasusay cilmiga Baayoolojiga Unugyada ayuu ku ogaaday in markii qofku gaajoodo uu jirkiisu bilaabayo in uu iska saaro kolestaroolka, kaarbohaydraytiska, sokorta, dufanka iyo cusbooyinka dheeraadka ah ee ku keydsan unugyada jirka, taas oo keeneysa in uu jirku iska saaro unugyada dhintay, kuwa naafoobay iyo kuwa gaboobay. Haddii aan unugyadaas jirka laga saarin waxay sababayaan kansar, gabow, asaasaq, sokor, cadaadiska-dhiigga iyo cudurrada wadnaha ku dhaca.
Iscunidda jirka(Autophagy) oo ah in uu jirku iska saaro walxahaas dheeraadka ku ah waxay bilaabaneysaa markii uu qofku shaqeeyo saacado xiriir ah oo uusan wax cunin, uuna sidaas joogteeyo maalmo badan, si unugyadii dhintay ama naafoobay aysan mar kale fursad ugu helin in ay soo noolaadaan.
Dr. Yoshinori Ohsumi wuxuu ku talinayaa in qofku isgaajeysiiyo oo uusan wax cunin 8 ilaa 16 saacadood oo xiriir ah, labo ilaa saddex maalin todobaadkiiba, sidoo kale uu qofku sidaas sameeyo hal bil sanadkiiba.
Dr. Yoshinori Ohsumi oo wax ka dhiga Machadka Cilmibaarista Halabuurka(IIR) ee jaamacadda Tokyo wuxuu cilmibaaristaan ku muteystay shahaadada caalamiga ah ee Nobel Prize, dhanka caafimaadka.
Aqoonta iyo ogaalka ay daaha ka rogeyso cilmibaaristaan oo Dr. Yoshinori lagu abaalmariyay 2016 wuxuu islaamku na faray 1440 sano ka hor, oo tiirarka islaamka ayay ka mid tahay in uu qofku sanad kasta cunnada iyo cabitaanka ka soomo 30 maalmood oo xiriir ah. Nabigeennuna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadaanee wuxuu muslimiinta u jideeyay in ay todobaad kasta ka soomaan labo maalmood (Isniin iyo khamiis).
Soonqaadku waa fursad sanadle ah oo ay muslimiintu ku nadiifiyaan jirkooda iyo naftoodda. Waa jaanis ay dembiyadii ka dhacay uga qubeystaan, ayna Alle uga muteystaan naxariis, dembi-dhaaf iyo naar-ka-xoreyn, ayna uga badbaadaan cudurro haya ama ku soo fool leh.
Soonqaad wanaagsan, saaxiib. Eebe soonkaan ha i nooga dhigo mid aan ka helno caafimaad, naxariis Rabbi, dembi-dhaaf iyo naar-ka-xoreyn. Maalmo nabdoon iyo habeenno xasilloon, Alle idankii.
Qore : Hussein Sabrie
Previous articleWaajibaadka Soonka Wax ka ogow!
Next articleWiil Dhalinyaro ah oo loo Dilay Bandowga Muqdisho iyo banaan bax ka dhashay